UN Peacekeeping Operation Course ဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ် | cincds
UN Peacekeeping Operation Course ဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ်
နေပြည်တော် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ - ၄
မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ဆိုင်ရာ တာဝန်များထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် အိန္ဒိယ တပ်မတော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖွင့်လှစ်သောကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်း သိမ်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း UN Peacekeeping Operation Course ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
အဆိုပါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Saurabh Kumar နှင့် စစ်သံမှူး Col. Naveen Mahajan ၊ အိန္ဒိယတပ်မတော် Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မှ နည်းပြအရာရှိများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ သင်တန်းသားစစ်သည်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ H.E.Mr. Saurabh Kumar တို့က အဖွင့်အမှာစကားအသီးသီးပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မှ နည်းပြအရာရှိတစ်ဦးက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ UN Peacekeeping Operation တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား Power Point ဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများ၊ (CUNPK) မှ နည်းပြအရာရှိများ၊ သင်တန်းသားများ နှင့် အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
အဆိုပါသင်တန်းမှာ (၆) ကြိမ်မြောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ အရာရှိ ၉၆ ဦး၊ စစ်သည် ၅၄ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုသင်တန်း၌ စစ်သည် ၃၀ ဦးတက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပြီး သင်တန်း၌ ကုလ သမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ၊ အရပ်သားများအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု၊ ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ကင်းလှည့်ခြင်း ၊ယာဉ်တန်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တပ်ခွဲ အခြေချစခန်းတည်ဆောက်ခြင်း ၊လေ့ကျင့်ခန်ြးူကနံနူာနအ ၊ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဆောင်ရွက်နေမှုများ စသည့်ဘာသာရပ်များအား စာတွေ့၊ လက်တွေ့ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
UN Peacekeeping Operation Course ဆိုငျရာသငျတနျးဖှငျ့လှဈ
နပွေညျတျော ၊ ဖဖေျောဝါရီ - ၄
မွနျမာ့တပျမတျောအနဖွေငျ့ ကုလသမဂ်ဂငွိမျးခမျြးရေးထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျမှု ဆိုငျရာ တာဝနျမြားထမျးဆောငျနိုငျရနျအတှကျ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ အိန်ဒိယ တပျမတျောတို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖှငျ့လှဈသောကုလသမဂ်ဂငွိမျးခမျြးရေးထိနျး သိမျးမှုဆိုငျရာသငျတနျး UN Peacekeeping Operation Course ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ Park Royal ဟိုတယျ၌ ကငျြးပပွုလုပျသညျ။
အဆိုပါဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားသို့ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိ ကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mr. Saurabh Kumar နှငျ့ စဈသံမှူး Col. Naveen Mahajan ၊ အိန်ဒိယတပျမတျော Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မှ နညျးပွအရာရှိမြား၊ မွနျမာ့တပျမတျောမှ သငျတနျးသားစဈသညျမြား တကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာ H.E.Mr. Saurabh Kumar တို့က အဖှငျ့အမှာစကားအသီးသီးပွောကွားကွသညျ။
ထို့နောကျ အိန်ဒိယနိုငျငံ Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK) မှ နညျးပွအရာရှိတဈဦးက အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ UN Peacekeeping Operation တှငျ ပါဝငျဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားအား Power Point ဖွငျ့ ရှငျးလငျး တငျပွသညျ။
ယငျးနောကျ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားသို့ တကျရောကျလာကွသူမြား၊ (CUNPK) မှ နညျးပွအရာရှိမြား၊ သငျတနျးသားမြား နှငျ့ အတူ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
အဆိုပါသငျတနျးမှာ (၆) ကွိမျမွောကျဖှငျ့လှဈခွငျးဖွဈပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈမှ ၂၀၁၈ ခုနှဈအထိ အရာရှိ ၉၆ ဦး၊ စဈသညျ ၅၄ ဦးတကျရောကျခဲ့ပွီး ယခုသငျတနျး၌ စဈသညျ ၃၀ ဦးတကျရောကျကွမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရပွီး သငျတနျး၌ ကုလ သမဂ်ဂငွိမျးခမျြးရေး ထိနျးသိမျးမှုတပျဖှဲ့ဝငျမြား စောငျ့ထိနျးလိုကျနာရမညျ့ ကငျြ့ဝတျမြား၊ အရပျသားမြားအား ကာကှယျ စောငျ့ရှောကျမှု၊ ကလေးသူငယျကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှု၊ စဈဘကျ-အရပျဘကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု၊ ကငျးလှညျ့ခွငျး ၊ယာဉျတနျး လုံခွုံရေးဆောငျရှကျခွငျး၊ တပျခှဲ အခွခေစြခနျးတညျဆောကျခွငျး ၊လကေ့ငျြ့ခနျွးူကနံနူာနအ ၊ကုလသမဂ်ဂငွိမျးခမျြးရေး ထိနျးသိမျးမှုလုပျငနျးမြား၏ သမိုငျးကွောငျးနှငျ့ဆောငျရှကျနမှေုမြား စသညျ့ဘာသာရပျမြားအား စာတှေ့၊ လကျတှေ့ လကေ့ငျြ့ သငျကွားပေးသှားမညျဖွဈပွီး ဖဖေျောဝါရီ ၁၅ ရကျအထိ ဖှငျ့လှဈသငျကွားသှားမညျဖွဈကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။